मास्क र सामाजिक दूरी बिना नै पठनपाठन सुरु | रक्त न्युज
मास्क र सामाजिक दूरी बिना नै पठनपाठन सुरु
जाजरकोट सदरमुकामस्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा ९३ जना विद्यार्थी एउटै कोठामा बसेर पढ्ने गरेका छन् । नौ महिना पछि भर्खर खुलेको सो विद्यालयमा ६ कक्षा देखि १० कक्षासम्म करिब ६ सय विद्यार्थी नियमित आउने गरेका छन् ।
सबै कक्षामा ६० भन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पढाउने गरिएको छ । तर कक्षाकोठा र शिक्षक अभावमा एउटै कोठामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी राखेर पढाउँदा कोरोना संक्रमण बढ्ने जोखिम बढिरहेको छ ।
कोरोना महामारीकै कारण गत चैत्रदेखि बन्द रहेका विद्यालय जाजरकोटका स्थानीय तहले खोल्ने निर्णय गरे सँगै पठनपाठन सुरु गरिएको छ । गत चैत्रदेखि कारोना महामारीको त्रासका बीच बन्द भएका विद्यालय खुलेपछि रोकिएको पढाइ सुचारु भएको भन्दै खुसी भएका विद्यार्थी र अभिभावक कोरोना सर्ने हो कि भन्ने सन्त्रासमा छन् ।
अधिकांश विद्यालयमा न मास्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ नत सामाजिक दूरी नै कायम गरिएको छ । जसका कारण कोरोना महामारी फैलिन सक्ने जोखिम बढ्ने संभावना देखिएको छ । त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिबहादुर बस्नेतले सबै विद्यार्थीलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
कोरोनाको प्रकोप समुदायका विभिन्न व्यक्तिमा देखापरिरहेको छ तर परीक्षणको दायरा बढाइएको छैन । शंकास्पदले समेत पीसीआर परीक्षण गर्न पाएका छैन । जिल्ला अस्पतालका डा. अमिन शाहले २० जनाको परीक्षण गर्दा ५/६ जनामा संक्रमण देखिने गरेको बताए ।
उनले भित्रभित्रै समुदायमा संक्रमण फैलिरहेको आशंका गरे । यस्तो बेला विद्यालय खोलिएका र सामाजिक दूरी कायम नगर्दा संक्रमण फैलने संभावना धेरै हुने डा. शाहको भनाइ छ ।
अघिल्लो लेखमाप्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक
अर्को लेखमाकमानसिंह लामा : राजनीतिदेखि कूटनीतिसम्म